TGSI-006 ahama taabashada bir qabatada silsilado / digniin la qobays carborundum - Shiinaha JBP GROUP (HK)
TGSI-006 ahama taabashada bir qabatada silsilado / digniin la qobays carborundum
Brand: JBP taabashada tilmaame Ujeeddo: In la siiyo hanuun jiho ama digniin halista in Airport, Railway Station, la maro Dadweynaha, Light Rail, Shopping Mall, Ascending iyo meelaha loogu talagalay dadka qaba aragtida. Waxyaabaha: 304/316 / 316L ahama Steel (Marine Grade) taabashada Ground meelaha Tusiyaha haraaga / Strip / Plate / faahfaahinta Tile: 25x35x5 mm / xirxirida 35x280x5mm: Standard kartoonka dhoofinta, 240 unug / CTN, 360 unug / CTN; 720 unug / CTN (ama xirxirida shakhsi) Price: $ 0.45- $ 0.8 MOQ: 100 ...
Brand: JBP taabashada tilmaame
Ujeeddo: In la siiyo hanuun jiho ama digniin halista in Airport, Railway Station, la maro Dadweynaha, Light Rail, Shopping Mall, Ascending iyo meelaha loogu talagalay dadka qaba aragtida.
Waxyaabaha: 304/316 / 316L ahama Steel (Marine Grade) taabashada Ground meelaha Tusiyaha haraaga / Strip / Plate / Tile
Faahfaahinta: 25x35x5 mm / 35x280x5mm
Xirxirida: kartoonka dhoofinta Standard, 240 unug / CTN, 360 unug / CTN; 720 unug / CTN (ama xirxirida shakhsi)
MOQ: 100 cutub
Hadaladiisa: Xaqiiji oo dhan of Standards Australia iyo New Zealand (AS / NZS: 1428), ay simbiriirixan u adkaysta oo kala duwan oo naqshado & qalabka. Easy si loo soo dajiyo, UV deggan.
Waannu karaynaa ha baarka sida aad design ka dibna u soo dir si aad u at our kharashka (Kasaar nidaamyada patent). kharashka Sample lagu dabooli doonaa noo by ilaa iyo inta aan lahayn caaryada cusub waxaa ka mid ahaa. Waxaan aaminsan nahay in aan idiin tahay saaxib fiican aad in this xareeyay.
Goobaha ahama Steel taabashada
ahama Steel taabashada silsilado
Ahama Steel taabashada silsilado Iyadoo Carborundom Insert
ahama Steel taabashada silsilado Iyadoo Daboolid Dillaaca
TGSI-011 ahama birta silsilado taabashada / warnin ...
TGSI-004 ahama birta silsilado taabashada / warnin ...
TGSI-007 ahama birta silsilado taabashada / warnin ...
TGSI-009 ahama birta silsilado taabashada / warnin ...
TGSI-012 ahama birta silsilado taabashada / warnin ...